Joornaalka Naqshadeynta
Xarunta Qurxinta Caafimaadku
Xarunta Qurxinta Caafimaadku Naqshadeynta ayaa ka badan suuxinta wanaagsan. Waa habka loo isticmaalo booska. Foomka isku dhafka ah ee rugta caafimaad iyo u shaqeynta sidii mid. Fahamka baahiyaha isticmaaleyaasha waxaadna siisaa waaya-aragnimo ku saabsan dhammaan taabashooyinka khiyaanada leh ee deegaanka ku xeeran ee dareemaya xasillooni iyo si dhab ah daryeel. Naqshadeynta iyo nidaamka teknolojiyadda cusub ayaa xallinta adeegsadaha si fududna u maareyn kara. Iyada oo la tixgelinayo caafimaadka, fayoobaanta iyo caafimaadka, xaruntu waxay qaadatay agab deegaan u waara oo u kuur gala howlaha dhismaha. Dhammaan walxaha waxaa lagu dhex darayaa qaabeynta halka ay runtii ku habboon tahay adeegsadayaasha.
Nashqadeynta Muuqaalka Muuqaalka
Nashqadeynta Muuqaalka Muuqaalka Sannadkii 20aad ee ODTU Sanat, oo ah xaflad farshaxan sanadle ah oo ay qabato Jaamacadda Farsamada Bariga Dhexe, ayaa codsigu ahaa in la dhiso luuqad muuqaal ah si loo muujiyo natiijada 20 sano ee soo socota. Sida la codsaday, sanadka 20-aad ee ciida ayaa lagu nuuxnuuxsaday iyada oo loo soo dhawaanayo sidii gabal faneed oo la daboolay. Hooska hadh isku midab ah oo sameysan tirooyinka 2, iyo 0 waxay abuureen khayaal 3D ah. Khayaaliintani waxay siisaa dareenka xasilloonida waxayna nambarrada u eg yihiin inay ku milmeen asalka. Xulashada midabka muuqda wuxuu abuuraa isbarbar yaac ku dhisan xasilloonida dabaysha 20.
Alwaax Whiskey Malbec
Alwaax Whiskey Malbec Iskudayista iskudayada qaybaha kala duwan ee tilmaamaya magaca sheyga, qaabeynta ayaa xoojineysa fariinta ay soo jeedineyso. Waxay gudbisaa muuqaal xiiso leh oo xiisa badan. Sawirka milkiilaha diidmada ah ee soo bandhigi karaya baalasheeda, wuxuu muujinayaa dareenka xorriyadda, wuxuu la jaan qaadayaa billadaha sumcadda iyo soojeedinta, wuxuu ku daray sawir asal ah oo leh muuqaal mala awaal ah kaasoo keena gabayada naqshadeynta, abuuraya isku darka ugu habboon si loo gudbiyo farriinta la doonayo. Palette midabbada miyir-qabka ayaa siinaya astaamo gaar ah iyo adeegsiga jibbaarradu waxay u diraan badeecad dhaqameed iyo taariikhi.
Nashqadeynta Naqshadaha Guryuhu
Nashqadeynta Naqshadaha Guryuhu Saadka ee qoyskan shaqeeya waxay u baahdeen inay joogaan guriga muddo dheer, taas oo ay u dheer tahay shaqada iyo iskuulku waxay carqalad ku noqdeen caafimaadkooda. Waxay bilaabeen inay ka fekeraan, sida qoysas badan, iyo inay u guuraan xaafadaha hoose, u kala beddelashada u dhowaanta adeegyada magaalada si ay u helaan daaq weyn si ay u kordhiyaan gelitaanka bannaanka ayaa loo baahnaa. Halkii ay uga guuraan meel fog, waxay go'aansadeen inay dhisaan guri cusub oo dib uga fiirsada xaddidaadda nolosha guriga gudaha ee magaalooyin badan oo yar. Mabda'a abaabulka mashruucu wuxuu ahaa in la abuuro gelitaanka bannaanka ee bannaanka ee ka jira meelaha la wadaago ee suurta galka ah.
Kiniiniyada Xashiishadda Cannabis
Kiniiniyada Xashiishadda Cannabis Baakadaha qarsoon ayaa la sameeyaa iyadoo la yiraahdo qaabka casriyeynta / casriyeynta oo leh dareen xasuus qor ah oo duug ah si markaas macaamiisha farmasiilaha ah ee taabashada taabashada ay uga celiyaan macmiilka indho-sarcaad iyo goor dambe halka fiirsashada faahfaahsan ee qaybaha naqshada naqshadeynta maamulaha lagu dhejiyay Qaab dhismeed guud oo lagu wareejinayo barta ugu weyn ee suuqgeynta: sheygan waxaa soo saaray shirkad xirfadleyda farmashiistaha ku xeel dheer oo ka kooban cuntada sirta ah ee farmashiistaha gacanta lagu sameeyo.
Barnaamijyada Mobilada Qaabka cusub ee loo yaqaan 'Akbank Mobile app' wuxuu bixiyaa aragti cusub marka loo eego arrimaha bulshada, xariifnimada, mustaqbalka-caddeynta iyo waayo-aragnimada bangiga abaal-marinta ah. Iyada oo la adeegsanayo qaabeynta aagga shaqsiyeed ee ku yaal bogga weyn, adeegsadayaashu waxay arki karaan aragtiyo caqli leh si ay u yareeyaan noloshooda maaliyadeed. Sidoo kale, iyadoo la raacayo qaabkan cusub ee naqshadeynta, macaamil xawilaadaha xawilaadaha waxay ku hadlaan luuqadda isticmaaleyaasha iyada oo suugaanta xiriirinta muuqaallada, ficillada la fududeeyay ay socdaan iyo fikradaha.
Axad 22 Bisha Sideedaad 2021
Xarunta Qurxinta Caafimaadku Nashqadeynta Muuqaalka Muuqaalka Alwaax Whiskey Malbec Nashqadeynta Naqshadaha Guryuhu Kiniiniyada Xashiishadda Cannabis Barnaamijyada Mobilada